सस्तो स्यामसंग ग्यालेक्सी फोल्ड २: निर्माताले यसलाई कसरी हासिल गर्ने यो यसरी छ Androidsis
यो खुला रहस्य हो कि कोरियाली निर्माता सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्डको उत्तराधिकारीमा काम गर्दैछ। हो, सियोल-आधारित फर्मबाट फोल्डेबल फोन एकदम ठूलो सफलता हो, र यसको मूल्य अत्यधिक छ। यस कारणका लागि, तिनीहरू पहिले नै एक नयाँ मोडेलको बारेमा सोच्दै छन्। सबै भन्दा राम्रो? के सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्ड २ सस्तो हुनेछ यसको पूर्ववर्ती भन्दा
हो, फर्मको विचार यो हो कि यो सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्ड २ अधिक सस्तो मोडल हो, र यस कारणले यो कार्य गर्दछ कि यो टर्मिनल १,००० युरो भन्दा बढि छैन। एक गोल फिगर जसले धेरै नयाँ ग्राहकहरूलाई यो नयाँ सामसु fold फोल्डिंग फोनमा शर्त लगाउँछ। तर कसरी तिनीहरूले यो हासिल गर्नेछन्? लाभहरु लाई कम गर्दै।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्ड २ मार्केटमा उत्तम प्रोसेसर हुने छैन
यो मोडेलको हुनु पर्छ सुपर फास्ट चार्जिंग सिस्टम यसले तपाईंलाई यस टर्मिनलबाट अधिक प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ, ठूलो ब्याट्री र यसलाई रेकर्ड समयमा चार्ज गर्ने सम्भावना प्रदान गर्दै। तर मूल्य घटाउने एक मात्र तरिका फाइदाहरू काट्नु हो। र निर्माताले लिन सक्ने पहिलो चरण स्नैपड्रैगन 855 XNUMX प्रोसेसरमा शर्त लगाउने छ।
यो सत्य हो कि हामी एक उच्च-अंत प्रोसेसरको सामना गर्दैछौं, तर 855 865+ पहिले नै बाहिर आइसक्यो, र 10 को तत्काल आगमनको आशा छ, त्यसैले हामी एक सोसिकाको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन यसको मूल्यलाई घटाउने छ। अर्कोतर्फ, फ्रन्ट क्यामेरामा १० मेगापिक्सलको रिजोलुसन हुनेछ, ग्यालक्सी नोट १० जस्तै।
अवश्य पनि, त्यहाँ उत्कृष्ट समाचार छ: त्यहाँ एक्सीनोस प्रोसेसरको साथ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्ड २ को संस्करण हुनेछैन। फर्मले क्वालकमको समाधानमा मात्र शर्त लगाउने निर्णय गरेको छ, यस तरिकामा हामी प्रोसेसरको फाइदा लिन सक्दछौं जुन खेल खेल्दा निस्सन्देह सियोलमा आधारित विशालका समाधानहरू हटाउँदछ।
र, यदि उनीहरूले वास्तवमै तल घटाउने प्रबन्ध गरे सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्ड २ मूल्य १,००० यूरो भन्दा तल, यसले हामीलाई बिल्कुल उस्तै प्रदान गर्दछ कि बजारमा प्रोसेसर उत्तम छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » के सैमसंग ग्यालेक्सी फोल्ड २ सस्तो हुनेछ? यस प्रकारले निर्माताले यसलाई प्राप्त गर्ने छ